» रेष्टुरेण्ट कर्मचारीलाई हजार रुपैयाँ टिप्स, नोट पढेपछि डाको छोडेर रोए कर्मचारी !
रेष्टुरेण्ट कर्मचारीलाई हजार रुपैयाँ टिप्स, नोट पढेपछि डाको छोडेर रोए कर्मचारी !
२ श्रावण २०७७, शुक्रबार ०६:०३
महामारकिो मार सबैभन्दा धेरै व्यवसायीहरुलाई परेको छ । र साथै त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि । उनीहरुलाई जीवन जिउनको लागि पैसा कमाउन समेत मुस्किल भएको छ । यसैबीच टिप्सको रुपमा एक व्यक्तिले रेष्टुरेण्टका कर्मचारीलाई हजार डलर दिएका छन् । तर नोटमा भने मन रुवाउने कुरा लेखिएको थियो ।
रेष्टुरेण्ट द स्टाविंग आर्टिस्टका मालिक आरनोल्ड टेक्सेराले उक्त टिप्स दिने व्यक्ति नियमित ग्राहक भएको बताएका छन् । उनी सन् २००१ देखि त्यहाँका नियमित ग्राहक थिए ।
भावुक बनेर रुन थाले कर्मचारी
टेक्सेराका अनुसार ग्राहक र उनको परिवारले चुपचाप खाना खाए र कुनै शब्द नबोली त्यहाँबाट निस्किए । जब उनले सर्भे गर्ने एक वेटरले उनले दिएको टिप देखिन् तब उनी भावुक भएर रुन थालिन् । त्यसपछि उनी बिस्तारै बिस्तारै शान्त भईन् । उक्त टिपको साथै एक नोट पनि थियो । नोट पढेपछि सबै रुन थालेका थिए ।
ग्राहकले भने धन्यवाद
उनले टिपको साथै एक नोट छोडेका थिए । जसमा ‘यो चुनौतिको समयमा काम गरिराख्न आवश्यक छ, स्वादिष्ट भोजन, मिठो मुस्कान र रमाईलो वातावरणका लागि धन्यवाद, द स्टारविंग आर्टिस्ट थिएन भने यो यति राम्रो हुने थिएन ।’
साथै उनले अन्तिममा सबै कर्मचारीको बीचमा टिप बाँड्न आग्रह गरेका थिए । रेष्टुरेण्टका मालिकले आफूलाई छोडेर अन्य कर्मचारीलाई उक्त रकम बाँडिदिएका छन् ।